नेपालमा रहेको भारु साट्ने व्यवस्था गर्छौँ - भारत - Internet Khabar
मंसिर २४ – नेपालमा भारु सटहीको सम्बन्धमा दुई देशका अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धीत सरकारी निकायहरु सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुले छिट्टै एउटा बाटो निकाल्ने भारतको विदेश मन्त्रालयले बताएको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
विशेषतस् भारतमा काम गरेर नेपाल फर्केका कामदार, बिरामी, विद्यार्थी तथा सिमनामा ठूलो संख्यामा नेपालीसँग भारु रहेको बताइएको छ । तर नेपालमा भारु रकम कति छ भन्ने यकिन भने भएको छैन । भारतमा नै पुरानो नोट साट्नको लागि डिसेम्बर ३० सम्मको डेडलाइन तोकिएको छ । सो डेडलाइन समिप आउँदै गर्दा नेपालमा रहेको भारु के हुने हो भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा खटिएकी छात्राको धपेडीका कारण मृत्यु
लोडसेडिङ कम गर्ने योजनामा अर्थमन्त्रालयको असहयोग
आज अमेरिकी डलर र मलेसियन रिंगिटको भाउ बढ्यो , अन्य देशको कति ?
आज कति छ सुन चाँदीको मूल्य ? हेर्नुहोस्
न्यून लगानीबाट सफल उद्यमी बन्दैछन् ग्रामीण महिला